indlela.Kodwa-ke, i-Quartz iyi-countertop engaboshiwe futhi imelana kalula namabala nokuchitheka.Isizathu esenza abantu bakuthole kunzima ukukhetha phakathi kwe-granite ne-quartz yingoba zombili ziyizinto ezihlala isikhathi eside kakhulu ze-countertop.I-Granite ine-downside-i-porous.Lokhu kusho ukuthi uketshezi olufana namanzi, iwayini, namafutha kungangena ngaphakathi kubangele amabala.Okubi nakakhulu, ikhuthaza ukuzalaniswa kwamagciwane ayingozi angashiya i-countertop yakho ingahlanzekile.I-Quiartz ayinazo izimbotshana futhi akudingeki ukuthi idlule ekufakweni kabusha okuvamile.Ingenye yezinketho ze-countertop ezihlanzekile kakhulu kubanikazi bezindlu.
Ikhwalithi yokulawula Ukubekezelela ukujiya(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mmI-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha
Izinzuzo uma kuqhathaniswa netshe lemvelo
Lokhu kubalulekile kungakhathaliseki ukuthi ukhetha yiphi impahla.Insipho elula kanye nokusula amanzi kungahamba ibanga elide.
Kodwa-ke, i-Quartz iyi-countertop engaboshiwe futhi imelana kalula namabala nokuchitheka.Isizathu esenza abantu bakuthole kunzima ukukhetha phakathi kwe-granite ne-quartz yingoba zombili ziyizinto ezihlala isikhathi eside kakhulu ze-countertop.
I-Granite ine-downside-i-porous.Lokhu kusho ukuthi uketshezi olufana namanzi, iwayini, namafutha kungangena ngaphakathi kubangele amabala.
Okubi nakakhulu, ikhuthaza ukuzalaniswa kwamagciwane ayingozi angashiya i-countertop yakho ingahlanzekile.
I-Quiartz ayinazo izimbotshana futhi akudingeki ukuthi idlule ekufakweni kabusha okuvamile.Ingenye yezinketho ze-countertop ezihlanzekile kakhulu kubanikazi bezindlu.
I-APEX izuze izitifiketi ze-SGS, Greenguard.
Imikhiqizo isebenzisa izinto eziphephile nezivumelana nemvelo ukuxhumana ngqo nokudla.Banikeza isiqinisekiso sokuphepha nokuvikelwa okuphezulu kumakhasimende.
Okwedlule: Itshe le-onyx yokwenziwa APEX-8607
Olandelayo: ukuthengisa okushisayo kwe-quartz carrrara emithanjeni emhlophe itshe le-quartz le-countertop APEX-8816-6
Itshe le-onyx yokwenziwa APEX-8607
I-Quartz Countertops yesimanje / Okuningi okumhlophe ukuthungwa b...
Intengo yeQuartz Countertops Itshe lequartz elimpunga AmaQuartz Countertops Slabs IEngineered Stone Market IQuartz Countertops engcono kakhulu yomkhiqizo IQuartz Marble Price